Ukuqhuma kwangaphakathi kweNtengiso | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Matshi 23, 2012 NgoMvulo, Septemba 23, 2013 Douglas Karr
Njengoko Iarhente yentengiso engenayo, sicinga ukuba kuyonwabisa ukuba ziiarhente ngaphambili kwinguqu engakholelekiyo kushishino lwearhente. Ukusuka kubathengisi ukuya kubayili, wonke umntu uhlawula ngakumbi kumfanekiso omkhulu wentengiso ekwi-Intanethi kunokusebenza kwii-silos okanye kwimimandla yokuthuthuzela. Ukusebenza kumajoni kunika iziphumo ezingaphezulu… kodwa akukho lula!
Ukuthengisa kwakusetyenziselwa ukuhlawula ingqalelo yabaphulaphuli bakho kunye nokuzama ukubarhwebeshela kude kuyo nantoni na abayenzayo ngaphambili. Kodwa enkosi kwiwebhu, umdlalo utshintshile. Ukuthengisa ngaphakathi kubandakanya inani lamaqhinga atsala abathengi ngokubanika ulwazi oluluncedo nolufanelekileyo. Usebenzisa ukuthengisa ngaphakathi, ungangena kubathengi abanomdla wokuthenga into oyithengisayo. Siphonononga ukuba urhwebo olungene ngokubanzi lubambe njani kwaye njani amashishini afumana impumelelo ngalo ngo-2012. Ukusuka kwi-G +'s infographic, The Inbound Marketing Explosion.
tags: kublogaukugcwala ngqourhwebo inboundmaphephaisizukulwana esikhokelayoukuthengisa okungaphandleukukhangela okuhlawulelweyoSEOImidiya yokuncokola
Mar 23, 2012 ngo 10:43 PM
Ukuba umhlobo wam ubonakalisa ukuphela kwexesha kunye nepropathi yokuthengisa izindlu nomnye umntu. Imithombo yeendaba zentlalo ligama eliyinkozo ... ayothusi iinkampani zabo ukuba zithontelana kuyo njengee-seagulls ukuya kwiisendwitshi.
Ndicinga ukuba njengoko iwebhu yentlalo ikhula nangona, siza kubona ukuvela kweshishini ngokunjalo. Ukuze usebenze kweli qonga litsha loluntu, kuya kufuneka ube nentlalontle. Kwaye amashishini awasetyenziselwa ukuhlala… ayoyikisa kubo. Kuya kufuneka bafunde ukuba njalo okanye baya kufa. I-Plain kwaye ilula.
Mar 28, 2012 ngo-10: 17 AM
Abathengi abafuni ukuziva ngathi bayathengiswa. Intengiso engenayo imalunga nokujoyina incoko, endaweni yokuyiqala. Abathengi abanesidingo bazakuzama isisombululo. Ukusebenza kwintengiso engenayo kuphucula amathuba okuba ube sisisombululo.
Mar 28, 2012 ngo-10: 35 AM
Embindini wale tshathi- ngaba iilebhile azilunganga? Ukuphuma kungaphantsi, Inbound ingaphezulu?
Mar 28, 2012 ngo 5:32 PM
Ndicinga ukuba unyanisile! @freighter uyiqaphele kwakamsinya nje ukuba siyithumele (whew… khange siyiyile leyo!)